Games ho an'ny ankizivavy traikefa nahafinaritra - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Games ho an'ny ankizivavy traikefa nahafinaritra
A fiainana tsy misy traikefa nahafinaritra raha tsy hahaliana. Ao amin'ny boky Nanahy izy ireo zava-nitranga rehetra mbamin'ny mahery fo, sary an-tsaina ny fihetseham-pony, ny fihetseham-pony, na ny sary an-tsaina dia afaka mahita sy mahatsapa ny herisetra ny tontolo singa. Online Games Adventures no noforonina ho anareo toe-javatra rehetra ilaina, ary afa-tsy ny hanatevin-daharana ny mahery fo, mba hilalao ary mba hahatonga azy ireo ho afaka nandeha. Ianao miandry ny loza, fandrika, mazes, biby sy anomalous faritra. Mifidy ny tsara tari-dalana sy manodinkodina zavatra, dia hahita ny vahaolana ho an'ny olana rehetra sy hahazo ny traikefa ilaina ho an'ny ho avy fanentanana.
Snowball Krismasy World
Adam & Eva GO
Be herim-po fotsiny,
Mystika Mahjong Adventures
Tom sy Jerry: Mouse Mazy
Jiolahin-tsambo sy ny tafondro
Lalao Adventure tamin'ny Category:
Farany Games ho an'ny ankizivavy traikefa nahafinaritra
Avana mena sy maitso
Ady amin'ny fiainana manontolo
Zazalahy Crate Undead
Heartreasure 2: ambanin'ny tany
Red sy Blue Adventure
Telozoro manga enigmatika
Lalao Online Rehetra Games ho an'ny ankizivavy traikefa nahafinaritra
Adventure Games Online - Craps milasy
Rahoviana ny dia, miandry azy mazava tsara sy tsy hay hadinoina fahatsapana fihetseham-po. Mametraka mialoha traikefa nahafinaritra iray falifaly, ary ny fanantenana ny zava-mitranga miavaka no mamaritra ny fitondran-tena. Na dia ny fiantraikany indrindra diany mety hivadika ho mampidi-doza Gamble, raha miezaka mafy.
Ny afo sy ny rano, ny kintana kambana, rahalahy sy anabavy pandas, Aine sy Kleine miaraka amin'ireo mpivady hafa mpandeha mafy manao ny lalana ho any amin'ny tena lavitra sy toerana bibidia havela ho hanesorana ny asa tanana sarobidy. Tsy maintsy hanao zavatra miaraka mba hisorohana ny loza, tsy fandrika, mihazakazaka ny rafitra mba handresy ny zava-tsarotra. Ny fahombiazana dia miankina amin'ny asa ny mpiray drafitra hatao, ary izany addicting lalao, natao ho an'ny tsy tapaka fanodinkodinana. Ahoana anefa no faly be no hiaina, fandresena ny zava-tsarotra sy nahatratra ny tanjona!
Nandritra ny lalao ho an'ny zazavavy traikefa nahafinaritra dia hihaona indray amin'ny Dora sy Diego ho tamin'ny antokony mba hitady harena jiolahin-tsambo, afa-tsy ny biby, mba nandeha izao tontolo izao. Ao amin'ny roa manan-danja maro asa, ary tamim-pahasahiana mivoaka, na dia ny heverina ho zava-tsarotra fihaonana. Ny oram-panala-fotsy volt alika ny fifehezana ireo tontolo ivelany, izay nanokatra azy ho eny ivelan'ny napetraka. Tsy nisy hevitra hoe be fitaka eo amin'ny fiainany, fa mahafehy tanteraka haingana sy manao asa manan-danja. Tandremo-niakatra taminy sy ny alika, ohatra, ny zana-tsipìka ny proteinina, izay sahy handresy toerana. Nandeha haingana izy ireo fanofanana amin'ny Baikonur sy amin'ny fanamiana feno nipetraka tao amin'ny cockpit ny sambon-danitra mba handeha mandeha sambo.
Adventure Fitadiavana amin'ny singa
Online Adventure Games tsy mifatotra ho tari-dalana manokana. Mety ho RPG amin'ny gunfights, fanangonana zavatra ao amin'ny Platform, ho afaka amin 'ny toerana sy ny fikatsahana fahafaham-po fonosina amin'ny nahay ny asa samy hafa. Ao amin'ny tranga farany tsy maintsy;
mba hahita ny zavatra sy ny fampiasana
nirenireny tany samihafa lalana
mba hamaha ny piozila
Ny mampitohy ny faritra
Tsy ilaina amin'ny kilalao rehetra manolotra ny mitovy napetraka ny toromarika. Ny mpamorona ny solosaina saintsaininy ny tena tompo-mpamorona. Indraindray dia mitranga tsy nampoizina tetika ahodiny, toy ny ao Zamora momba ilay lehilahy kely izay mandeha manodidina ny saritaka izao tontolo izao, miezaka mba hisorohana ny fifandonan'ny planeta, na ny planeta ny alika manafaka avy amin'ny ambany fifehezan'i ny mpaka an-keriny firenena hafa.
Aza adino ny milalao ao amin'ny lalao momba ny gidro sambatra, izay tsy hiseho voalohany toy izany. Vorompano fianakaviana monina ao amin'ny nitomany falifaly, fa tokony hanampy azy ireo hiatrika ny asa, ny mpikambana rehetra tonga any amin'ny tsy hay lazaina finaritra. Na dia hivadika toe-javatra toy izany, toy ny hazo Krismasy firavaka ho an'ny rajako olana - mila mba hahita ny baolina, nahantona ba kiraro ho an'ny fanomezana, ary be ny asa ...
endri-tsoratra hafa dia hiaraka anao amin'ny isan-karazany niainany. Dia hihaona mampihomehy vahiny Pou, voly iray mpanara mihetsiketsika foana nihaona tamin'i Jerry sy Tom, fa ny kely The Simpsons fianakaviana, dia afaka miresaka ela, satria dia tena trano fitehirizana ny hisetra zavatra manaitaitra.
heroically-traikefa nahafinaritra ny lalao
Aza mipetraka tsy misy zava-nitranga Super Mario, Sonic, Spiderman, Batman, izay fara heriko sy ny endri-tsoratra sy ny tantara an-tsary virtoaly tantara. Ny olon-drehetra mila olona mba hamonjy, mba hiady ny legiona ny demonia, biby goavam-be, sy ny etỳ an-tany kosmitov fahavalo. Ny lalana tsy rakotry ahi-dratsy, satria araka ny asa vaovao miseho mandrakariva, sarotra kokoa sy mitaky.